Vaovao - Mihena ny fanasokajiana sarimihetsika
Ny film shrink dia ampiasaina amin'ny fizotry ny varotra sy ny fitaterana vokatra isan-karazany. Ny asany lehibe indrindra dia ny fanamafisana, ny fandrakofana ary ny fiarovana ny vokatra. Ny sarimihetsika mihena dia tsy maintsy misy fanoherana ambony amin'ny puncture, fihenan-tsakafo tsara ary fihenan-tsakafo sasany. Mandritra ny fihenan'ny dingana, tsy afaka mamoaka lavaka ilay horonantsary. Matetika ny sarimihetsika mihena dia matetika ampiasaina any ivelany, ilaina ny manampy solontena anti-ultraviolet UV. Anisan'izany ny horonantsary mihena OPS / PE / PVC / POF / PET.
1) Ny horonantsary mihena hafanana PE dia be mpampiasa amin'ny famonosana divay, kapoaka, rano mineraly, zava-pisotro isan-karazany, lamba ary vokatra hafa. Ny vokatra dia manana fahalalahana tsara, fanoherana ny fiantraikany, fanoherana ny ranomaso ary tsy mora tapaka. , Tsy matahotra onja, tahan'ny fihenan'ny be;
2) Ny sarimihetsika PVC dia manana ny mampiavaka azy amin'ny mangarahara avo, gloss tsara ary ny shrinkage avo;
3) ny POF dia manana ny toetran'ny gloss ambony, ny hamafiny, ny fanoherana ny ranomaso, ny fihenan'ny hafanana ary mety amin'ny fonosana haingam-pandeha mandeha ho azy. Izy io dia vokatra azo soloina amin'ny horonantsary nentim-paharazana hafanana PVC. Ny POF dia midika hoe horonantsary mihena hafanana. Ny POF dia mijoro ho sarimihetsika multi-layer co-extruded polyolefin heat shrinkable film. Mampiasa polyethylene ambany hakitroka toy ny sosona afovoany (LLDPE) sy co-polypropylene (pp) ho toy ny sosona anatiny sy ivelany. Atao plastika sy esorina ao ivelan'ny masinina, ary avy eo amboarina amin'ny alàlan'ny dingana manokana toy ny famoronana die sy ny fiakaran'ny vidim-piainana.
4) Ny horonantsary mihena OPS (polystyrene miorina) hafanana mihena ny hafanana dia karazana fonosana hafanana vaovao miaraka amina ops hafanana mihena mihetsika izay mahafeno ny fepetra fiarovana amin'ny tontolo iainana. Ny horonan-tsary OPS hafanana mihena dia manana tanjaka avo, henjana avo, endrika miorina, ary diplaoma tsara ary mangarahara. Fanodinana mety, fandokoana mora, fampisehoana pirinty tsara, ary vahaolana avo lenta. Ho an'ireo mari-pamantarana izay manenjika tsy tapaka ny fanaovana pirinty tsara dia fanatsarana tanteraka ny fitaovana. Noho ny fihenan'ny haavo sy ny tanjaky ny horonantsary OPS, dia afaka mifanakaiky amina kaontenera misy endrika isan-karazany izy, noho izany tsy afaka manonta lamina mahafinaritra ihany, fa koa mahafeno ny fampiasana kaontenera fonosana vaovao misy endrika samihafa.
Sarimihetsika tsy misy poizina, tsy misy fofona, mahatohitra menaka manara-penitra ny fenitry ny fahadiovana ara-tsakafo no ahafahan'ny mpamorona mampiasa loko mahasarika maso hahatratrarana famolavolana marika 360 °, hanome ny lalao feno ny fahaiza-mamorona sy ny fisaintsainana, ka ny zava-pisotro sy vokatra hafa dia mety ho eo amin'ny marika Ireo maodely ampiasaina dia mazava kokoa, manasongadina ny sary eo amin'ny talantalana, ary mamokatra vokadratsy tsy ampoizina. 5) Ny mampiavaka ny sarimihetsika polyester azo ovaina PET: miorim-paka amin'ny mari-pana ara-dalàna izy, mihena rehefa mafana (ambonin'ny mari-pana fiovana fitaratra), ary ny hafanana mihena mihoatra ny 70% amin'ny lalana iray.
Ny tombony azo avy amin'ny fonosana sarimihetsika polyester azo ovaina dia:
①Ny mangarahara ny vatana ary hita taratra ny sarin'ny vokatra.
② Hamafiso tsara ny fonosana, fanoherana tsara ny fanaparitahana.
③ Porofon'ny orana, ny hamandoana ary ny ahitra.
④Tsy misy fanarenana, miaraka amina lahasa fanohitra fanoherana sandoka sasany.
Ny sarimihetsika polyester azo ovaina dia matetika ampiasaina amin'ny sakafo mora, tsena zava-pisotro, fitaovana elektronika, vokatra vy, indrindra ny marika mampihena no lohalaharana fampiharana lehibe indrindra. Satria amin'ny fivelarana haingana ny tavoahangy misy zava-pisotro PET, ny tavoahangy zava-pisotro toy ny cola, sprite, ary ny ranom-boankazo isan-karazany dia mitaky sarimihetsika mafana azo hafanaina PET mba ampifanarahana amin'ny labozia misy tombo-kase. Anisan'ny sokajy polyester izy ireo ary fitaovana azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana izay mora amboarina. ampiasaina. Ankoatry ny fampiasana azy ireo ho toy ny marika mampihena, ny sarimihetsika polyester azo hafanaina hafanana dia ampiasaina ihany koa amin'ny fonosana ivelany amin'ny entana isan'andro.
Satria tsy afaka miaro ireo entana fonosana amin'ny hatairana, orana, hamandoana ary harafesina ihany izy io, fa mahatonga ny vokatra hahazo ny mpampiasa amin'ny fonosana ivelany vita pirinty tsara tarehy, ary afaka mampiseho tsara ny endrik'ilay mpanamboatra. Amin'izao fotoana izao, mihamaro ny mpanamboatra fonosana mampiasa sarimihetsika mihemotra vita printy hanoloana ny sarimihetsika mangarahara nentim-paharazana. Satria ny sary mihetsika mihena dia afaka manatsara ny fisehoan'ny vokatra, izy io dia mahasoa amin'ny fanaovana doka ny vokatra, ary ny marika famantarana dia mety hisy fiheverana lalina ao am-pon'ny mpanjifa.
Mihena ny fitsipiky ny milina famonosana sarimihetsika
Fanitsiana arbiteritra Ny ambany dia miaraka amin'ny casters, izay azo atosika araka izay itiavany azy, ary ny haavony dia azo ahitsy arakaraka ny haben'ny fonosana.
1. Ataovy aloha ny ora fanafanana ny milina.
2. Aorian'ny fanerena ny bokotra manual na mandeha ho azy, ny valizy solenoid varingarina dia manome hery sy famoahana hanosehana ny fitaovana, ary ny fitaovana dia manosika ilay rojo. Amin'izao fotoana izao dia maty ny switch eo akaiky eo amin'ny varingarin'ny talantalana. Rehefa mihazakazaka mankany amin'ny foibe maty ny varingarin'ny talantalana dia velomina ny vatan'ny varingarin'ny talantalana eo aloha, ary omena hery sy famoahana ny valva solenoid an'ny varingarin'ny lafaoro.
3. Rehefa mihazakazaka mankany amin'ny foibe maty ny vovo-lafaoro, manomboka mihemotra ny timer ary vahana ny herin-tsolika solenoid valantsara.
4. Rehefa tapitra ny fotoana, ny valizy solenoid an'ny varingarina lafaoro dia miala hery.
5. Araho ny sainam-piasana mode mode, manapaha hevitra raha hanohy ny fizotran'ny asa manaraka.
Ny fampahalalana mifandraika momba ny sarimihetsika mihena izay nolazain'ny mpampanonta anao androany dia eto. Mino aho fa ny olon-drehetra dia manana fahatakarana feno momba ny fanasokajiana ny sarimihetsika mihena ary ny fomba fampiasana horonantsary mihena rehefa avy namaky ny famaritan'ny tonian-dahatsoratra, sa tsy izany? Ny film shrink dia tena mety, mora ampiasaina ary mitahiry vola be. Ity karazana fonosana ity dia tsy sariaka amin'ny tontolo iainana. Sarotra kokoa ny manodina rehefa vita ny fampiasana ary somary ambany ny tahan'ny fampiasana azy indray, ka azo lazaina fa tsy azo ampiasaina indray. Manantena ny hisian'ny sarimihetsika mihemotra tsara sy milamina kokoa amin'ny tontolo iainana isika amin'ny ho avy.
Temperature famonosana polyolefin, Mitete Film Pvc, Mihena horonan-tsary horonan-tsary, Famonosana Polyolefin Pof Shrink, Horonan-tsarimihetsika Vs Shrink Wrap, Sarimihetsika Polyolefin Pof Shrink,